I-Casa Cosmos, indawo ekahle yolwandle - I-Airbnb
I-Casa Cosmos, indawo ekahle yolwandle
Puerto Escondido, Oaxaca, i-Mexico
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Claudio
U-Claudio Ungumbungazi ovelele
I-Casa Cosmos iyindlu ekahle kakhulu yokuthi uphumule, woza uzozinqamula ezinxushunxushwini zedolobha.
Kuleli bhishi elikude logu lwaseMexico Pacific, uzokwazi ukuyeka ukucindezeleka, sifuna ukujabulele ukuhlala kwakho, ube nesikhathi nesikhala sokuqeda leyo ncwadi obuzimisele ukuyifunda noma ujabulele ukushona kwelanga okumangalisayo ngenkathi hamba phansi ogwini.
I-Casa Cosmos yakhelwe ukuthi izivakashi zikhumbule lokho kunambitheka kwempilo esivame ukuyikhohlwa edolobheni, ukuze sibe nesikhathi sokucabanga ngokubaluleka kwendawo yethu yonke, indawo, iplanethi nemvelo esizungezile.
Lesi sikhala esincane sakhiwe njengendlu engavuleka ngokuphelele emvelweni, ekukhanyeni, emoyeni ... noma ivalwe ukuze isondelane kakhulu. Ngokubuka okumangalisayo kolwandle, ukushona kwelanga okucasha ngemuva kwentaba eduze kwendlu, kanye ne-ecosystem enkulu ehlanganisa indlu ngokwemvelo.
Impilo kule ngxenye yolwandle izwakala ihamba kancane, ikunikeza isikhathi sokujabulela umzuzu nomzuzu, lokho kuchaphazeka echibini lokubhukuda noma olwandle, ubusuku obugcwele izinkanyezi ophahleni kuyilapho uzipha ingilazi yewayini.
Ungaphumula kwelinye lama-hammocks ethu endlini, noma ugeze ilanga; noma yini oyifunayo i-Casa Cosmos iyindawo ekahle yolwandle ukuze ujabulele iholide lakho. Ilungele izithandani noma ukuba wedwa nezincwadi zakho nohlu lwadlalwayo oluyintandokazi.
4.86 · 156 okushiwo abanye
I-Casa Cosmos itholakala kwelinye lamabhishi akhethekile e-Mexico, ezungezwe imvelo, ubuciko, ukudla, nolwandle olukhulu.
Le ndawo iye yazuza ukunakwa okukhulu emhlabeni wonke ngemva kwezihloko eziningi komagazini abahlukahlukene abadumile, zikhuluma ngokukhethekile ngokubaluleka kwezakhiwo nezobuciko kuzo. Ungathola umsebenzi kubakhi abawine imiklomelo be-Pritzker njengo-Tadao Ando, u-Alvaro Siza, u-Kengo Kuma, kanye nabadwebi bezakhiwo base-mexican abafana no-Alberto Kalach, u-Ambrossi no-Etchegaray, u-Aranzazu de Ariño no-S-AR.
Ngiyakuthanda ukuvakasha, yingakho ngiqonda ukubaluleka kokuba nezincomo namathiphu avela kubasingathi bami, ngakho ngilapho kakhulu uma udinga noma yiziphi izincomo. Ngizophinde ngikuthumelele umhlahlandlela omuhle wokwamukela nayo yonke imininingwane oyoyidinga ukuze uhlele futhi ujabulele ukuhlala kwakho ePuerto Escondido.
Ngiyakuthanda ukuvakasha, yingakho ngiqonda ukubaluleka kokuba nezincomo namathiphu avela kubasingathi bami, ngakho ngilapho kakhulu uma udinga noma yiziphi izincomo. Ngizophinde n…